DAAWO SAWIRRO: Muxuu madaxweynaha Koonfur Galbeed ‘Laftagareen‘ kala hadlay Odayaashii reer Waajid ee uu la kulmay? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Muxuu madaxweynaha Koonfur Galbeed ‘Laftagareen‘ kala hadlay Odayaashii reer Waajid...
DAAWO SAWIRRO: Muxuu madaxweynaha Koonfur Galbeed ‘Laftagareen‘ kala hadlay Odayaashii reer Waajid ee uu la kulmay?
Waajid (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayaa waxaa uu habeenkii Isniinta Degmada Waajid ee Gobolka Bakool uu kula kulmay odayaasha iyo waxgaradka ee reer Waajid.
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo Isniintii gaaray Degmada Waajid ayaa sheegay inay u yimaadeen, sidii degmadaasi looga saari lahaa go’doominta ay maleeshiyada Al Shabaab ku hayaan.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo sidoo kale u kuurgelaya xaaladda nololeed ee degmadaasi ka jirta iyo sida ay tahay noloshada dadka deegaanka ayaa ka xaal wareystay odayaashii iyo waxgaradkii uu xalay la kulmay.
Maleeshiyada Al-Shabaabka oo dhooban wadooyinka deegaanada soo gala Degmada Waajid ayaa gaadiidka ganacsiga u diiday inay taggaan degmadaasi, haddii kalena ay dab qabadsiin doonaan.
Xaaladda go’doominta ee ka jirta Degmada Waajid ayaa sicir barar ku keentay qiimihii caadiga ahaa ee quutul daruuriga, shidaalka iyo agabyada kale ee ganacsi la kala siisan jiray.
Waxyaabaha nolosha asaasiga u ah ee la keeno Degmada Waajid ayaa si xatooyo ah lagu soo geliyaa degmadaasi, iyadoo dadku uu dhib badan ka maro, sidii uu ku gaarsiin lahaa degmadaasi.
Madaxweyne Laftagareen ayaa shalay degmadaasi ka sheegay in Shabaabku ay reer Waajid u diideen inay hellaan adeegyada caafimaadka, gargaarka iyo waxbarashada, ha yeeshee ay markaan ka shaqayn doonaan, sidii ay heeryadooda dadka deegaanka uga dul-qaadi lahaayen.
Laftagareen oo la kulmay odayaasha reer Waajid
Odayaasha iyo waxgaradka reer Waajid